Animation – Categories – Channel Myanmar
TMDb: 7.9/10 224 votes
DOTA: Dragon’s Blood – Season 02
DOTA: Dragon’s Blood – Season 01 DOTA: Dragon's Blood - Season 01=========================IMDb Rating - 9.2/10ကမ္ဘာကျော် ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ DOTA ထဲက ဟီးရီုးတွေကို အခြေခံပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ကာတွန်းစီးရီးတစ်ခု နက်ဖလစ်ကနေ ပြသလိုက်ပါတယ်။ အဓိက ဇာတ်ကောင်ကတော့Dragon Knight ဒေဗီယံ ပဲဖြစ်ပြီး၊ သူ့ရဲ့ စွန့်စားခန်းတွေနဲ့ အခြားသော ဟီးရိုးတွေနဲ့ ပတ်သတ်မှုတွေကို ဇာတ်လမ်းဆင်ရိုက်ကူးထားတာပါ။ ရုပ်ထွက်တွေရော ဇာတ်လမ်းရော ကောင်းမွန်တာမို့ ဘာသာပြန်ပြီး တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ အားပေးကြပါဦး။ဒီ စီးရီးဟာ ၈ ပိုင်းတိတိထွက်ရှိလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။(ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ အညွှန်းကို Littleneo မှရေးသားပေးပြီး၊ ဘာသာပြန်ရေးသားပေးသူများကတော့ Littleneo,d3mon တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။) Quality – 1080p WebRipDuration – 30 mins (@Episode)Subtitle – Myanmar HardsubFormat – Mp4Genre : Animation, Action, AdventureSource : ...
TMDb: 9.2/10 4762 votes
DOTA: Dragon’s Blood – Season 01
Olaf Presents(2021) Olaf Presents (2021)=====================(mini စီးရီး အနေနဲ့ 5ပိုင်းအဖြစ်ထွက်ရှိထားပေမယ့်တစုတစည်းတည်းကြည့်လို့ရအောင်တပိုင်းတည်းအဖြစ်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ် )Let it go, Into the Unknown စတဲ့သီချင်းတွေနဲ့ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့Frozen ကားလေးကတော့ လူတိုင်း သိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ဒီကားလေးထဲမှာမှElsa, Anna တို့အပြင် လူတိုင်း ချစ်ခင်ကြတဲ့ မုန်လာဉနီနှာခေါင်းလေးနဲ့နှင်းလူသားလေး Olaf ကတော့ဖြင့် comback လာခဲ့ပြန်ပါပြီ။ Comeback တောင်ရိုးရိုး Comeback မဟုတ်ဘဲ Disney ရဲ့ သမိုင်းဝင်ကားတွေဖြစ်တဲ့The Little Mermaid, Moana, The Lion King, Aladdin,Tangled, Frozen စတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကို အတိုချုံးပြန်လည်တင်ဆက်တဲ့Olaf Presents ဆိုတဲ့ Mini Series လေးအဖြစ် ပြန်လည် ထွက်ပေါ်လာတာပါ။Olaf Presents မှာ အပိုင်း ၆ ပိုင်း ပါဝင်ပြီးတော့ တစ်ပိုင်းစီက Disney ကားဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့"The ...
TMDb: 7.4/10 90 votes
Star Wars: Visions (2021) Star Wars: Visions (2021)================IMDb Rating - 7.1/10Star warလို့ဆိုတာနဲ့ မသိသူမရှိလောက်ဘူးထင်ပါတယ်။ Monsterတွေ Alien တွေကိုသာ အသားပေးရိုက်ကူးနေတဲ့ sci-fi နယ်ပယ်မှာ sci-Space fantasy ဇာတ်လမ်းအသွားအလာနဲ့ လမ်းဖောက်ပစ်ခဲ့ပြီး ရုပ်ရှင်လောကကိုကိုင်လှုပ်သွားခဲ့တဲ့ legendary sci-fiဇာတ်ကားပါ။ အခုထွက်ရှိလာတဲ့ Star War:Vision ကလည်း Animation Studioပေါင်းများစွာက အတော်ဆုံး Animation creators တွေကနေ ဖန်တီးထားတဲ့ animation short film seriesတစ်ခုဆိုတော့.... ဖန်တီးထားတဲ့ studio တွေကလည်း Kamikaze Douga , Trigger, Studio Colorido, Kinema Citrus, Science Saru, Production I.G စတဲ့ Japanese animeလောကမှာနာမည်ကြီးတဲ့ studios တွေကပူးပေါင်းရိုက်ကူးထားပြီး Disney+ကထုတ်လွှင့်ထားတာပါ။စတူဒီယိုပေါင်းစုံရဲ့လက်ရာတွေနဲ့ နာမည်ကြီး Love Death + Robots စီးရီးလို တစ်ပိုင်းကို animation စတိုင်တစ်မျိုးစီထူးခြားနေမှာပါ။ ပိုထူးခြားတာက ...
TMDb: 7.6/10 107 votes
Marvel’s Hit-Monkey (2021) Marvel's Hit-Monkey (2021)====================IMDb Rating - 8.4/10Hulu ကနေ မာဗယ်ကာတွန်းတစ်ခုကို တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ စုစုပေါင်း ဆယ်ပိုင်းပါဝင်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကတော့ခေါင်းစဉ်အတိုင်းပါပဲ။ မျောက်လူသတ်သမားပါ။ဆရာမျောက်ဟာ အစတုန်းကတော့ တောအုပ်ကြီးထဲက မျောက်အုပ်ထဲက ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ မျောက်တစ်ကောင်သက်သက်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ သူတို့ဆီကို သေနတ်ဒဏ်ရာနဲ့ရောက်လာတဲ့ အရမ်းတော်တဲ့ ကြေးစားလူသတ်သမားကို ကယ်တင်လိုက်မိပြီးနောက်မှာသူ့ဆီကနေ အတိုက်အခိုက်အသတ်အဖြတ် ပညာတွေ ရလာပါတယ်။ လူသတ်သမားနောက်ကို လိုက်သတ်လာတဲ့ လူတစ်စုကြောင့်သူ့ရဲ့ ဆွေမျိုးမျောက်တွေအကုန်သေပြီး လူသတ်သမားလည်း သေသွားတဲ့အခါ ဒီတာဝန်ကိုခိုင်းလိုက်တဲ့လူတွေကို ရေဆုံးမြေဆုံးကလဲ့စားချေဖို့ သေနတ်တွေဓားတွေကို ဆွဲပြီး ထွက်လာပါတော့တယ်။ မာဗယ်ကာတွန်းဇာတ်အိမ်ခိုင်ခိုင်နဲ့ ရုပ်ထွက်ကောင်းကောင်းနဲ့အထာကျကျ ရိုက်ကူးထားတာမို့ အတော်လေးကြည့်လို့ကောင်းမှာ သေချာပါတယ်။(ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ အညွှန်းကို Mr.Anderson မှရေးသားပေးပြီး . ဘာသာပြန်ရေးသားပေးသူကတော့ CM Team မှဖြစ်ပါတယ်။) Quality – 1080p Web-DL 5.1CHDuration – 30 mins (@Episode)Subtitle – Myanmar ...
TMDb: 8.4/10 1200 votes
Maya and the Three(2021) Complete Maya and the Three (2021)Netflix က ထွက်ရှိလာတဲ့ animation series တစ်ခု တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။Animation ဆိုပေမဲ့ ကလေးကြိုက်ဇာတ်လမ်းမျိုးမဟုတ်ဘဲဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်ခိုင်ခိုင်နဲ့ ရိုက်ကူးထားတာမို့သေချာပေါက် ကြည့်ရှုခံစားသင့်တဲ့ series လေးပါအညွှန်းလေးကို ဆက်လက်ဖတ်ရှုပေးပါဦး။ရှေးလူကြီးတွေ ထားခဲ့တဲ့ ဗျာဒိတ်တော်အရဧရာမလင်းယုန်ကြီးတစ်ကောင်နဲ့ ရဲရင့်သောဂျာဂွာသုံးကောင်သာလူ့လောကကြီးကို ကယ်တင်ဖို့အတွက် အမှောင်နတ်ဘုရားကိုရှင်းလင်းသုတ်သင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့။တက်ကာပြည်ကြီးရဲ့ မင်းသမီးတစ်ပါးဖြစ်သူ မာယာဟာထိုလင်းယုန်ကြီးအဖြစ် တိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့ စစ်သူရဲကောင်းဖြစ်ချင်နေပါတယ်။မင်းသမီးတစ်ပါးလို မပြုမူနိုင်ဘဲ တိုက်ခိုက်ဖို့ကိုသာ စိတ်ပါနေတဲ့အတွက်မင်းသမီးအဖြစ် နန်းတက်ရမဲ့နေ့မှာပဲ မိခင်ဖြစ်သူ ဘုရင်မကြီးနဲ့ကတောက်ကဆဖြစ်ပြီး မတတ်သာတဲ့အဆုံး နန်းတက်ပွဲကို လက်ခံလိုက်ရတယ်။ပွဲတော်ကျင်းပနေတုန်းမှာပဲ အမှောင်မြေအောက်တိုင်းပြည်ကသံတမန်တစ်ယောက်ရောက်ရှိလာပြီးမင်းသမီးကို ခေါ်ဆောင်သွားဖို့ ကြိုးပမ်းပါတော့တယ်။ဒါကို ဘယ်လိုတားဆီးပြီး ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲဆိုတာကိုတော့CM ပရိသတ်ကြီးတို့ကိုယ်တိုင် ဆက်လက်ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်။အပိုင်း ၉ ပိုင်း ပါဝင်ပြီး IMDB 8.5 ရရှိထားပါတယ်။လှပ သစ်ဆန်းလှတဲ့ animation ရိုက်ချက်တွေကြောင့်စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရှုရမှာမို့ လက်မလွတ်သင့်ကြောင်း တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအညွှန်းကို Thet Hnin Hsu မှ ရေးသားထားပါတယ်။ File Size ...
Maya and the Three(2021) Complete
What If…? (2021) What If...? (2021)=======================================IMDb Rating - 8.7/10Marvel စူပါဟီးရီုး စီးရီးအသစ် ထွက်လာပြန်ပါပြီ။ ဒီတစ်ခါတော့Animation အနေနဲ့ထွက်လာတာပါ။ကမ္ဘာဒီဘက်ခြမ်းက လိပ်ပြာ​​လေးက ​တောင်ပံ​လေးတစ်ချက် ခတ်လိုက်တာ​ပဲ...ဒါ​ပေမယ့် ကမ္ဘာဟိုဘက်ခြမ်းမှာ​တော့ ​လေဆင်နှာ​မောင်းပါ တိုက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ "Butterfly effect"ဆိုတာကို ကြားဖူးကြသလားဗျ၊"အကယ်၍များ" ဒီလိပ်ပြာ​လေး ​တောင်ပံမခတ်ခဲ့ရင်၊ "အကယ်၍များ" ငါဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချလိုက်မိရင် စသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်​ဆောင်မှု​​​သေး​​သေးလေး တစ်ခုက တစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့ ကံကြမ္မာကို ​ပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့အဖြစ်မျိုးလူတိုင်းကြုံဖူး၊ ကြုံလာရမှာပါ။ "အကယ်၍များ" ​ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု​ကြောင့် Marvel Universe တစ်ခုလုံးက​ပေါက်တိက​ပေါက်ချာဖြစ်သွားခဲ့ရင် ပရိတ်သတ်​တွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးသား ဇာတ်​ကောင်​တွေပြောင်းလဲကုန်​ရင်အပြိုင် World​အသစ်တွေ၊ Multiverse အသစ်​တွေ ထွက်​ပေါ်လာရင်....စသဖြင့် မ​ရေမတွက်နိုင်တဲ့ ဖြစ်နိုင်​​ခြေ​တွေ၊Timelineအသစ်၊ Universeအသစ်​တွေကို ချပြသွားမယ့် Marvelရဲ့ Brand New Animation seriesအသစ်" What if....? " ထွက်ရှိလာပါပြီ။Live actionက အသံသရုပ်​ဆောင်​ တော်​​တော်များများ ပြန်ပါလာသလို ပရိတ်သတ်​တွေနဲ့ ...
TMDb: 8.7/10 298 votes
Dug Days (2021) Complete IMDb Rating (8.4)Up 2009 ကာတွန်းဇာတ်ကားထဲက အဘိုးကြီး Carl ရဲ့ ငယ်ချစ် Ellie အပေါ်ထားတဲ့ချစ်မေတ္တာဟာ ခုထိပြောစမှတ်ပြုစရာပဲမလားCarl အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မင်းသားကြီး Ed Asner ကတော့ 29-8-2021 လွန်ခဲ့တဲ့လကပဲ ဆုံးသွားခဲ့ပြီ..သူဆုံးသွားပေမယ့် သူ့ဇာတ်ကောင်ရဲ့မေတ္တာတွေက Movie ချစ်သူတွေကြား ထာဝရ ရှင်သန်နေမှာပါ...ဒီစီးရီးလေးမှာ Carl တစ်ယောက် ရေတံခွန်ကခေါ်လာတဲ့ခွေးလေး dug နဲ့အတူအိမ်အသစ်လေးမှာ ဖြတ်သန်းနေတဲ့ ဘဝနေဝင်ချိန်လေးတွေကို တွေ့ရမှာပါဘယ်လောက်ကြာကြာ ချစ်ဇနီး ellie ကို မေ့မရခဲ့တဲ့ Carl အတွက်စကားပြောတတ်တဲ့ ခွေးလေး Carl ဟာ ဘဝအဖော်မွန်ပါပဲမေတ္တာတရားဆိုတာ ရောင်ပြန်ဟပ်ပါတယ်ဆိုတာ Disney ထုံးစံအတိုင်းပါးပါးလေး ပြပေးဦးမှာပါကိုယ့်ရဲ့ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေရဲ့ သစ္စာရှိပုံတွေ ပတ်ဝန်းကျင်က တိရိစ္ဆာန်လေးတွေကို ကြင်နာသနားသင့်တာတွေသံယောဇဉ် မေတ္တာတရားကို တိုတိုနဲ့ ထိထိမိမိဖော်ပြထားတဲ့ ဒီစီးရီးဟာခံစားတတ်သူတွေ အတွက် မျက်ရည်ဝဲ‌လောက်စရာဇာတ်ဝင်ခန်းတွေ..ကြောင်နဲ့ကြွက်ကားထဲကလို ခွေးလေး Dug ...
TMDb: 7.7/10 104 votes
Dug Days (2021) Complete
The Legend of Nezha (2003) The Legend of Nezha (2003) နီကျား လို့ကြားလိုက်တာနဲ့ ..... ကွင်းလေးကိုင် မီးဖိနပ်စီးထားတဲ့ ကောင်လေးကိုပြေးမြင်မိကြမှာပါ။ ဒဏ္ဍာရီမှာတော့ ဆိုးလွန်းလို့ .... အဖေနဲ့တောင်ပြန်စစ်ခင်းရတဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီ Animation Series မှာတော့ ..... နီကျားလေး မွေးဖွားချိန်ကစပြီး ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတဲ့သူတွေကို အချိတ်ဆက်မိမိနဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုချင်းစီ ချိတ်ဆက်ထားတာမို့ အကြိုက်တွေ့ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ 90'Born တွေ အတွက် ငယ်ဘဝ အလွမ်းပြေဖြစ်သလို .... အခုခေတ် ကလေးတွေလည်း ကြည့်လို့ မရိုးသေးမယ့် ကာတွန်းဇာတ်လမ်းကောင်း တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာပြန် နဲ့ Review ကတော့ Lwin Htoo Aung ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ 480 p ဆိုပေမယ့် အတော်ကို ကြည်တဲ့ ဗားရှင်းမို့ စိတ်မပျက်စေရပါဘူး။ File size… 230 MB Quality…. 480p Format…mp4 Duration…. 22 min Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Translator ..... Lwin Htoo Aung Encoder ..... August Episode 01 ...